एउटा परेवाको मूल्य १४ करोड ! – Satyapati
बीबीसी । एउटा परेवाको मूल्य कतिसम्म पर्ला ? तपाईं कति रुपैयाँ तिरेर किन्नुहुन्छ ? हजार…, १० हजार… वा सोभन्दा कम ? तर बेल्जियमा भएको एउटा परेवा १९ लाख डलर (भारु १४ करोड) रुपैयाँभन्दा बढी तिरेर किनिएको छ । ‘न्यु किम’ नामको उक्त परेवा दुई वर्षका मात्रै थिए ।
पहिला यसलाई २३७ डलरमा लिलामीमा राखिएको थियो । तर चीनका एक व्यक्तिले त्यसलाई १९ लाख डलरमा किनेका छन् । समाचार एजेन्सी रोयर्टसका अनुसार, त्यो परेवा पालेका कुर्त वाउवर परिवार यो खबर सुनेर छक्क परे । दुई वर्षीय ‘न्यु किम’ ले यसअघिको रेकर्ड तोड्न सफल भएका छन् । यसअघि चार वर्षका पुरुष परेवालाई १४ लाख डलरमा किनेको रेकर्ड थियो ।
रेसिङ च्यापियन परेवा
रेसिङ च्याम्पियन अरमान्डोलाई परेवाहरुको लुइस हैमिल्टन पनि भनिन्छ । सेवानिवृत्त भएपछि उक्त परेवालाई सन् २०१९ मा बेचियो । त्यस्तै न्यु किमले सन् २०१८ मा राष्ट्रियमध्ये दूरी रेससहित थुप्रै रेसहरु जितेका छन् । त्यसपश्चात न्यु किम पनि सेवानिवृत्त भए ।
पछिल्लो केही वर्षयता चीनमा परेवाहरुको रेस धेरै लोकप्रिय भइरहेको छ । अरमान्डोलाई पनि चिनियाँ नागरिकले नै किनेका थिए । भने अरमान्डो जस्तै न्यु किमलाई किन्नका लागि पनि धेरै चिनियाँहरुबीच मूल्यमा प्रतिस्पर्धा चलेको थियो ।
१० वर्षसम्म सन्तान उत्पादन गर्न सक्ने
यस्ता रेसिङ परेवाहरुले १० वर्षको उमेरसम्म बच्चा उत्पादन गर्न सक्दछन् । यस अर्थमा न्यु किमका मालिकले पनि त्यसलाई प्रजनन्का लागि प्रयोग गर्नेछन् । निकोलसका अनुसार बेल्जियममा करिब २० हजार परेवा पालकहरु छन् ।
लिलामी संस्था पीपाका सीईओ निकोलासले रोयर्टसलाई भने, ‘यो रेकर्ड मूल्य अविश्वसनिय छ किनकि यो (न्यु किम) एक पोथी परेवा हो । सामान्यतः यो प्रजातिको परेवाको मूल्य महँगो हुन्छ किनभने यसले धेरै बच्चा जन्माउन सक्छ ।’